Abahlinzeki bemikhiqizo neFektri - Abakhiqizi Bemikhiqizo yaseChina - Ingxenye 4
Imaski yobuso yezokwelapha yokusetshenziswa okukodwa
Izimaski zobuso bezokwelapha ezilahlwayo zenziwe ngezendlalelo ezimbili zendwangu engalukiwe enokugqoka okuphefumulayo, efanelekile ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Izici zobuso zobuso ezilahlwayo:
Ukumelana nokuphefumula okuphansi, ukuhlunga komoya okusebenzayo
Songa ukwakha isikhala sokuphefumula esinobukhulu obuthathu esingu-360 degree
Idizayini ekhethekile yabantu abadala
Imaski yobuso bezokwelapha yokusetshenziswa okukodwa (usayizi omncane)
Idizayini ekhethekile yengane
Imaski yokuhlinzwa yezokwelapha yokusetshenziswa okukodwa
Amaski wokuhlinza wezokwelapha angavimba izinhlayiya ezinkulu kunezingama-microns ezi-4 ububanzi. Imiphumela yokuhlolwa kweLabhoratri Yokuvala iMask endaweni yokubekisa esibhedlela ikhombisa ukuthi izinga lokudlulisa imaski yokuhlinzwa lingu-18.3% wezinhlayiya ezincane kuno-0.3 microns ngokuya ngamazinga ejwayelekile ezokwelapha.
Izici zobuso bokuhlinza:
Microfiltration indwangu yokuncibilika kwendwangu: ukumelana namagciwane othuli impova yomoya amakhemikhali athinta intuthu nenkungu
Isendlalelo sesikhumba esingalukiwe: ukumuncwa komswakama
Isendlalelo sendwangu ethambile engalukiwe: ukumelana kwamanzi okuhlukile komhlaba
I-Alcohol pad ingumkhiqizo osebenzayo, ukwakheka kwayo kuqukethe i-70% -75% isopropyl alcohol, nomphumela wokuvala inzalo.
84 isibulala-magciwane esinenqwaba ebanzi yokuvala inzalo, ukungasebenzi kwendima yegciwane
Le yi-atomizer yasendlini encane enosayizi ohlangene nesisindo esincane.
1.Ngabagugile noma izingane ezinokuzivikela okuncane futhi ezichaphazeleka ezifweni zokuphefumula ezibangelwa ukungcoliswa komoya
2. Akudingeki uye esibhedlela, yisebenzise ngqo ekhaya.
3.Convenient ukuyifeza, ingasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi
<< <Langaphambilini 12345 Okulandelayo> >> Ikhasi 4/5